Shina LED eny an-dalana fahazavana mpanamboatra ary mpamatsy - Langxu Lighting.
Home > Products > Street Light > LED eny an-dalana fahazavana
Ny jiro LED dia hafa noho ny jiro mahazatra mahazatra. Ny loharano maivana LED dia fantsom-bolan'ny herinaratra ambany lenta, ny hazavana fotsy avo lenta avoakan'ny synthôtika amin'ny alàlan'ny GaN miorina amin'ny karazana manga manga sy mavo. Izy io dia manana fahaiza-miasa ambony, fiarovana, angovo tahiry, fiarovana ny tontolo iainana, ela velona, ​​valiny haingana, indoste manao rendrika loko ambony, sns .. Ny tombony tokana dia azo ampiharina amin'ny làlana. Ny fonony dia azo atao amin'ny fanoherana ny hafanana avo hatramin'ny 135 degre ary ny fanoherana ny hafanana ambany hatramin'ny -45 degre.
1, ny mampiavaka azy - ny toetra tsy miombon-kevitra amin'ny hazavana, tsy misy famerana hazavana, hahazoana antoka ny fahombiazan'ny hazavana.
2, ny jiro LED dia manana endrika famolavolana optika miavaka faharoa, ny jiro amin'ny arabe LED dia milentika any amin'ny faritry ny hazavana ilaina, manatsara kokoa ny fahombiazan'ny hazavana hahatratrarana ny tanjaky ny angovo.
3, LED dia nahatratra 110-130lm / W, ary mbola betsaka ny efitrano ho an'ny fampandrosoana, ny sandan'ny teoria amin'ny 360lm / W. Ny fahombiazan'ny jiro sela avo lenta dia mitombo amin'ny fisondrotana ny hery. Noho izany, ny jiro fahazavana amin'ny hazavana amam-pandeha LED dia matanjaka noho ny jiro sodium avo lenta; (ity vokatra manjelika amin'ny ankapobeny dia teorika, raha ny marina dia ny fahombiazan'ny jiro mitana ny tsiranoka sodium avo lenta amin'ny 250W dia avo noho ny an'ny jiro LED.)
4. Ny fanolorana loko amin'ny jiro LED dia avo lavitra noho ny jiro sodium avo lenta. Ny fanondroana ny loko momba ny jiro sodium avo lenta dia eo ho eo amin'ny 23 eo ho eo, raha toa ka mahatratra 75 na mihoatra ny fika fanodinana loko ny loko jiro LED. Avy amin'ny fomba fijerin'ny psikolojia ara-tsaina, tratra ny hazavana mitovy ary azo alaina ny faran'ny fanazavana ny jiro LED. Maherin'ny 20% ambany noho ny jiro sodium avo lenta.
5, kely ny hahena dia maivana, ny hahena ny latsaky ny 3% ao anatin'ny herintaona, mbola mameno ny fitakian'ny làlana taorian'ny 10 taona nampiasana azy, ary ny filan'ny tsiranoka sodina avo lenta, izay nidina mihoatra ny 30% tao anaty taona na mihoatra. Noho izany, ny jiro LED an-dalambe dia ampiasaina hampiasaina hery. Mety ho ambany noho ny jiro sodium avo lenta.
6. Ny jiro LED dia manana fitaovana fanaraha-maso mandeha ho azy, izay mety hahavita ny fampihenana ny herinaratra farany sy hamonjy angovo rehefa mahafeno ny filan'ny jiro amin'ny vanim-potoana samihafa. Mety mahatsapa ny fitrandrahana solosaina, ny fifehezana ny fizaram-potoana, ny fanaraha-maso ny hazavana, ny fanaraha-maso ny mari-pana, ny fanaraha-maso mandeha ho azy ary ny fiasa hafa maha-olombelona.
7, fiainana maharitra: afaka mampiasa mihoatra ny 50 000 ora, manome fahatokisana ny telo taona. Ny zavatra nihena dia ny fiainana tsy maintsy iankinan'ny herinaratra.
8, fahombiazan'ny hazavana avo lenta: ny fampiasana sotrokely ambony ambonin'ny ‰ ¥ 100LM, raha ampitahaina amin'ny jiro sodina haingam-pandeha nentim-paharazana dia afaka mamonjy mihoatra ny 75%.
9, mora apetraka: tsy mila manisy tariby tsy misy mpanamboatra, sns, apetraka mivantana eo amin'ny tsato na ny loharano maivana ao anaty tranobe jiro tany am-boalohany.
10, fifehezana hafanana tena tsara: fifehezana ny hafanana amin'ny fahavaratra eo ambanin'ny 45 degre, ary ny fangatahana pasifika, tsy ampy ny fiarovana ny fahavaratra.
11, kalitao azo itokisana: famatsiana herinaratra mandeha amin'ny alàlan'ny kalitao avoakan'ny kalitao avo lenta, samy manana ny fiarovana misimisy kokoa ny LED, tsy mila manahy ny fahasimbana izy ireo.
12, loko jiro fanamiana: tsy misy lesoka, aza ampitomboina ny hazavana ary sorona ny loko maizina fanamiana, mba hahazoana antoka fa tsy loko fanamiana loko aperture.
13, LED dia tsy ahitana rakitra vy manimba, tsy hanimba ny tontolo iainana rehefa voakilasy.
Buy LED eny an-dalana fahazavana nyvy nymin'ny Lnyngxu Lighting mpnymnytsy nyry mpnymoknytrny, isikny mnynnynny ny betsaka ny fomba LED eny an-dalana fahazavana ao amin'ny staoky. Welcome ny fitsaharana nyssured ny wholesnyle nyry cusnymized LED eny an-dalana fahazavana Style nyvy nymin'ny ny fnycnyry, isikny dia manome ianao amin'ny chenyp pricelist nyry tsara indrindra quotnytion for ianao.